यौनाङ्ग काटेर कुटपिट, घाइते भएपछि आगो लगाएर हत्या - Speak Corner
Featured Bamdev Gautam’s Case Kept Under Study In Constitutional Bench, Next Hearing On Friday २१ माघ २०७६, मंगलवार २२:००
Featured थप सातजना कोरोना संक्रमितको निधन २१ माघ २०७६, मंगलवार २२:००
Featured पीसीआर शुल्क बढी लिने प्रयोगशालालाई २४ घण्टे अल्टिमेटम २१ माघ २०७६, मंगलवार २२:००
Featured बलात्कारकाे घटना राेक्न सरकारले निष्ठापूर्वक काम गरिरहेकाे छ : गृहमन्त्री थापा २१ माघ २०७६, मंगलवार २२:००
Featured पछिल्लो २४ घन्टाभित्र कोरोना संक्रमणबाट १० जनाको निधन २१ माघ २०७६, मंगलवार २२:००
Featured घिरौलाका १० फाइदा २१ माघ २०७६, मंगलवार २२:००
Featured मोरङमा होटल साहुले कुट्दा ग्राहकको मृत्यु २१ माघ २०७६, मंगलवार २२:००
Featured नरिवल पानी पिउँदा हुन्छ यी फाइदा २१ माघ २०७६, मंगलवार २२:००
Featured २५ प्रतिशत नेपालीमा मुटुरोग २१ माघ २०७६, मंगलवार २२:००
Featured कोरोनाको जोखिम अझै पूर्वानुमान गर्न सकिन्न : परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली २१ माघ २०७६, मंगलवार २२:००
यौनाङ्ग काटेर कुटपिट, घाइते भएपछि आगो लगाएर हत्या
समाचार २१ माघ २०७६, मंगलवार २२:००
मान्छे कतिसम्म क्रुर बन्न सक्छ ? अझ अपराधका घटनामा कतिपय दानवीय प्रवृत्ति देखिन्छन् । झापाको चारपानेमा एक जनाको यसरी नै हत्या भएको अवस्थामा शव...
मान्छे कतिसम्म क्रुर बन्न सक्छ ? अझ अपराधका घटनामा कतिपय दानवीय प्रवृत्ति देखिन्छन् । झापाको चारपानेमा एक जनाको यसरी नै हत्या भएको अवस्थामा शव फेला परेको छ । स्थानीयका अनुसार सुरुमा ढुङ्गाले हानेर घाइते बनाइएका युवकलाई परालको कुन्युमा लगेर आगो लगाएर मारिएको छ । घटनास्थल वरपर रगत देखिएको छ भने मृतकको लिङ्ग पनि काटिएको स्थानीयले बताएका छन् ।
घटनास्थल भन्दा केहीपर कुटपिट गरेर रक्ताम्मे बनाइएपछि घिसार्दै ल्याएर कुन्युमा फ्याँकेर आगो लगाइएको जस्तो देखिएको स्थानीय बताउँछन् । स्थानीय ऐनकुमार राजवंशीको खेतमा ती पुरुषको शव भेटिएको हो । ‘शरीरका संवेदनशील अंगमा काटिएपछि घाइते बनाएर आगो लगाइएको जस्तो देखिएको छ’, एक स्थानीयले भने ।
झापा प्रहरीले पनि जलाएर एकजनाको हत्या भएको जनाएको छ । यद्यपि, झापा प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपी महेन्द्रकुमार श्रेष्ठले मृतक महिला वा पुरुष के हो भनेर स्पष्ट भइनसकेको बताए । स्थानीय सुभाङ शेख हराइरहेकाले शव उनैको हुनसक्ने प्रारम्भिक अनुमान प्रहरीको छ ।
चारपाने चोकदेखि दुई सय मिटर दक्षिणमा जलेको अवस्थामा शव भेटिएको हो । डीएसपी मुकुन्द रिजालले कुन्युसँगै जलेको अवस्थामा शव भेटिएको बताए । ‘घटनास्थलको प्रकृति हेर्दा सुरुमा कुटपिट गरी परालको कुन्युमा लगेर आगो लगाएको देखिन्छ’, डीएसपी रिजालले भने । प्रहरीले तालिम प्राप्त कुकुरको सहायतामा अनुसन्धान अघि बढाएको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
‘प्रहरीले शेखको परिवारका सदस्यलाई नियन्त्रणमा लिएर प्रारम्भिक अनुसन्धान थालेको छ’, प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘घटनाको सबै अनुसन्धान पूरा हुन समय लाग्छ ।’ प्रहरीले सेखकी श्रीमती पारुका र छोरी सुष्मा सेखलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । कुन्युमा राति आगो लाग्दा समेत प्रहरीलाई जानकारी नदिइएकाले घटना नियोजित हो भन्ने प्रहरी निष्कर्ष छ । खेतमा शव देखिएपछि स्थानीयले मंगलवार बिहान प्रहरीलाई खबर गरेका थिए ।